Ezinye i-Pixel 3a kunye ne-3a XL iqalisa ngokungalindelekanga | I-Androidsis
Ezinye iGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL zinengxaki ngokuqala kwakhona
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL zaziswa ngokusesikweni. Iifowuni zokuqala zikaGoogle phakathi kuluhlu oluphakathi, adventure entsha kraca. Emva kwengcaciso-ntetho yabo, ezi modeli zimbini zasungulwa kwiwebhusayithi yohlobo lweMelika, apho banokuthengwa ngokusemthethweni. Abasebenzisi abaninzi bakwenzile oku kwaye sele besebenzisa iifowuni zabo. Nangona ezinye iingxaki zifumaneka, kwezinye iimeko.
Kukho abasebenzisi abaneengxaki ngokuqala kwakhona. Oku kwaziwa kwiiforamu ezahlukeneyo. Ukongeza, yingxaki echaphazela zombini iPixel 3a kunye nePixel 3a XL. Iifowuni ezimbini zebrendi zibonisa oku kusilela, okwenzekayo kwabanye abasebenzisi.
Ingxaki inento yokwenza nezinye iifowuni unengxaki yokuvalwa ngequbuliso kunye nokuqala kwakhona, Ngaphandle kokuba umsebenzisi enze nantoni na. Kwakhona, kukho abasebenzisi abanezi Pixel 3a okanye i-3a XL abanayo le ngxaki amatyeli aliqela ngosuku. Ke ngaphandle kwesaziso sangaphambili, ngaphandle kwento eyenziweyo malunga nayo, oku kuyenzeka.
Abasebenzisi abanale ngxaki bayasokola kuyo kwiimeko ezininzi. Nangona kubonakala ngathi kukho amaxesha amabini apho yenzeke khona ikakhulu. Eyokuqala kuxa bexhumeke kwinethiwekhi ye-WiFi. Kwakhona xa beyekiswa ukusebenzisa ukuqala okungalindelekanga okunje. Ubuncinci kwabanye abasebenzisi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ingxaki echaphazela abasebenzisi abaninzi yenye yePixel 3a okanye iPixel 3a XL. Ukuza kuthi ga ngoku inkampani ayikasabeli kule meko. Ke asazi okwangoku imvelaphi yoku kusilela. Okunokwenzeka uhlaziyo sele luza kukhutshwa ukusombulula ngayo ukusilela.
Kodwa asikazi okwangoku ukuba singalindela nini ukuba isungulwe. Ke abo basebenzisi banePixel 3a okanye i-3a XL, kuya kufuneka balinde de iphehlelelwe ngokusemthethweni. Ngokuqinisekileyo kule veki siza kuba neenkcukacha ezithe kratya malunga nezi ngxaki kunye nesisombululo sazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ezinye iGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL zinengxaki ngokuqala kwakhona
Isivumelwano seenyanga ezintathu nxamnye neHuawei
I-Realme 3 Pro iya kuba yifowuni yokuqala yophawu eSpain